musha Oceania Kylie Minogue Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
CB inopa Nyaya Yakazara yeCeleb yakapihwa zita remadunhurirwa "Princess of Pop“. Icho chizere chakafukidzwa cheKylie Minogue Yehucheche Nhau, Biography, Mhuri Chokwadi, Vabereki, Hupenyu hwepakutanga, uye zvimwe zvinozivikanwa zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Ehe, munhu wese anoziva nezve ake akasarudzika iconic performance inova yechipiri kune hapana muAustralia. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Kylie Minogue's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Kylie Minogue Nyaya Yehucheche Nyaya:
Kylie Ann Minogue akazvarwa pazuva re28th raMay 1968 kuna amai vake, Carol Ann Jones aimbove mutambi wetsiva uye baba vake, Ronald Charles Minogue accountant muMelbourne, Australia.
Ndiye dangwe pavana vatatu vakazvarwa mumubatanidzwa pakati pevabereki vake, Carol Jones naRonald Charles Minogue. Pazasi pemufananidzo wakanaka wevabereki vaKylie Minogue pavanenge vachifamba.
Vabereki vaKylie Minogue, Carol Ann Jones, naRonald Charles Minogue.
Nyika yeAustralia yerudzi rwevachena neIrish, Welsh uye Chirungu midzi yemhuri chimvuramabwe kubva kumhuri yepakati-yemhuri kumashure.
Mhuri yaKylie yekuIreland yakabva pamadzitateguru ababa vake nepo kwake kweWales neChirungu kwakateedzerwa kumadzitateguru ake.
Akakurira muSurrey Hill muMelbourne kwaakakurira pamwe nasisi vake Danielle Jane Minogue nemunin'ina wake, Brendan Minogue.
Muimbi weAustralia akakurira pamwe nevanun'una vake kuMelbourne.
Semwana, Kylie Minogue aigara achifara uye aigara achishandisa imwe yake yemahara nguva kuverenga. Iye zvakare akashanda mukusona uye akadzidza kuridza piyano uye violin pazera diki kwazvo.
Akafarira kuita pamwe chete nemunin'ina wake mumitambo yakasiyana siyana uye madrama mapfupi. Kylie ainyatsoziva nezve yaimbove basa raamai vake rekutamba uye aive akagadzirirwa kukwirisa kuita kwaamai vake kana akura.
Kylie Minogue Dzidzo:
Kufanana nevanin'ina vake, aive nerombo rekuwana dzidzo yepamutemo. Vabereki vaKylie Minogue vakatanga kumunyoresa kuStudfield Primary School mushure maizvozvo akaendeswa kunopedzisa chikoro chake chepuraimari kuCamberwell Primary School.
Akawanawo HSC yake (akapedza chikoro chesekondari) kubva kuCamberwell High Chikoro muSurrey Hill, Melbourne.
Muimbi akapinda Chikoro cheCamberwell Primary.
Chakaitika chaChikoro chaKylie Minogue: Ndichiri kudzidza paCamberwell High School, Minogue akakwanisa kusangana kusvika pakati nepakati kuita zvedzidzo kuita uye aive nemwero pakuita basa semudzidzi.
Akanga akanyatsochengetwa uye aisakwanisa kuita shamwari zviri nyore. Mushure mechikoro, vabereki vaKylie Minogue vakamupa mvumo yekutanga kutora zvidzidzo zvekuimba nekutamba. Kubva pairi, aikwanisa kuvaka hwaro hwebasa rake muindasitiri yevaraidzo.
Kylie Minogue Bio - Yekutanga Basa Rehupenyu:
Unoziva here? Minogue akasvika pakuvhenekerwa muindasitiri yemamuvhi aine makore gumi. Sezvinotyisa sezvazvinogona kuratidzika, Kyrie akawana mukana wekuratidzira musipo opera mushure mekuperekedza Dannii kunonzwa iyo yakarongedzwa natete vavo, Suzzette.
Minogue yakapihwa diki diki yekutamba mumusambo opera "The Sullivans" mu1979 uye zvakare yakaverengerwa mu "Skyways" (1980).
Pop Pop princess akatanga aine diki chikamu mu'The Sullivans '.
Kunyangwe aive achiri mudiki pakutanga kwake, Minogue aifanira kuisa simba rakawanda mukumutamba basa rake. Makore mashoma mushure mekuita kwake kudiki muSkyways, Akakandirwa mune rimwe remabasa anotungamira mu "The Henderson Vana".
Kylie Minogue Biography - Mugwagwa Kune Mukurumbira Nhau:
Kuita hakuna kuratidza kuve nyore sezvakafungidzirwa naMinogue. Aifanirwa kutora nguva yekuenda kuchikoro kutora firimu Henderson Vana, aigara achichema mushure mekudanidzirwa nevagadziri vake nekuda kwekukanganwa mitsara yake.
Mumwaka wechipiri wechiratidziro, izvo zvisina kutarisirwa zvakaitika sezvo Minogue akaburitswa mufirimu mushure mekunge mugadziri Alan Hardy abvisa hunhu hwake muchirongwa.
Prodigy yeAustralia yakadonhedzwa kunze kwemwaka wechipiri weThe Henderson Kids.
Nemaitiro ake akanyorwa-muHenderson Vana, Minogue akanyatsoongorora mumhanzi waive wekutanga basa raanofarira.
Akagadzira tepi yedemo aine hanzvadzi yake diki, Dannii semugadziri wenguva dzose wevagadziri vechirongwa chevhiki nevhiki chemimhanzi Young Talent Nguva.
Kylie Minogue Biography - Simuka Mukurumbira Nhau:
Muna 1986, Minogue akakandirwa musipo opera, Vavakidzani saCharlene Mitchell, musikana wechikoro akachinjisa garaji makanika. Iyo bhaisikopo munguva pfupi yakawana mukurumbira muAustralia yose ichiwana mukurumbira wake mukuru pamwe nemubairo wakawanda.
Akakurumidza kuimba rwiyo runonzi "Kufamba-famba" mukonisheni uye akazo saina kondirakiti nekambani yekurekodha inonzi Mushroom Records muna 1987. Rwiyo rwake - Loco-motion - rwakave rwiyo rwekutengesa zvakanyanya uye rwakakwidza machati emumhanzi eAustralia kwemavhiki manomwe.
Mugore rimwe chetero, Minogue akave munhu wekutanga kuhwina mana maLogie Awards mugore rimwe chete uye munhu wechidiki kugamuchira Goridhe Logie Mubairo.
Iyo Loco-Motion yakave yakakunda uye Yakaridzwa mimhanzi yeAustralia kwenguva yakareba.
Nekukurumidza kumberi kunguva yekunyora iyi bio, kuzadzikiswa kwaKylie Minogue hakugone kukanganiswa sezvo achionekwa semumwe wevanonyanya kufarirwa maAustralia maartist munguva dzichangopfuura.
Kunge Dolly Parton, John Legend, uye Post Malone, Minogue akasarudzwa kumarudzi akasiyana eGrammy Awards kuhwina mazita mashanu kubva panguva yekunyora.
Pakukunda iyo Kwakanakisa Ngoma Kureketa mibairo pamakumi mana nematanhatu eGrammy Awards mugore ra46, pfungwa yaMinogue yekuenderera mberi nekubudirira yakadzikiswa zvichidaro kuwedzera kuwedzera kuvandudzwa mumabasa ake aitevera. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Kylie Minogue Hukama Hupenyu Chokwadi:
Unoziva here?… Minogue akabatwa neanopfuura makumi maviri evarume muhupenyu hwehukama kubva paakasimuka kuva nemukurumbira.
Sezvo zvisingaite sezvazvinogona kuratidzika, iye achiri asina kuroora panguva yekunyora iyi bio. Kylie Minogue anga ari muhukama neanotevera;
Jason Donovan (1984 - 1989), Michael Hutchence (1989 - 1991), Lenny Kravitz (1991), Zane O'Donnell (1991 - 1993), Evan Dando (1994), Jean- Claude Van Damme (1994), Nick Cave ( 1995 - 1996), Stephane Sednaoui (1996 - 1998), Pauly Shore (1997), James Gooding (1998 - 2001), Michael Di Nuzzo (1998 - 1999), Rupert Penry-Jones (1999), Jay Kay (2003), Olivier Martinez (2003 - 2007), uye Prince Andrew (2017).
Hukama hwaMinogue haungogumiri pakufambidzana chete, asi anga aroorwa kune vaviri vakakurumbira pakati pemakore 2009 na2017.
Akanga akavimbiswa naAndrés Velencoso kubva muna 2009 kusvika 2013 uye ndokuzopedzisira odanana naJoshua Sasse uyo waakazopfimbana naye.
Kubatanidzwa kwake kuna Joshua Sasse hakuna kuzotora nguva yakareba sezvo shiri mbiri dzerudo dzakaparadzaniswa mushure megore rimwe rekubatirana pazuva re1 Kukadzi 2017.
Aimbove akavimbisana naAndrés Velencoso (L) naJoshua Sasse (R).
Kylie Minogue Hupenyu Hwemhuri:
Mhuri yemuimbi weAustralia yakaita basa rakakosha kwazvo mukutsika basa rake kubudirira pajecha renguva.
Kutarisa muhupenyu hwenhengo yega yega yemhuri yake kunokupa iwe pfungwa yekunzwa mashandiro avakaita vakabatana mukusvika padanho rebudiriro ravakawana panguva yekunyora.
Nezve baba vaKylie Minogue:
Ronald Charles Minogue ndibaba vaKylie Minogue. Charles uyo aive akahodha aka accountant aifanirwa kushanda kuburikidza nemabasa akasiyana kuitira kuti asangane nezvinodiwa zvemari zvemhuri yake.
Nekuda kwekutsvaga kwake basa rinobhadharwa zvirinani, iye nemhuri yake vaigara vachifamba kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe.
Kylie nababa vake, Ronald Charles Minogue.
Nezve amai vaKylie Minogue:
Carol Ann Jones ndiamai vaMinogue. Akange agara muWales kubva panguva yekuzvarwa kwake kusvika mhuri yake yatamira kuAustralia aine makore gumi. Carol aive nyanzvi yekutamba uye akazo shanda semukadzi wetii pachipatara chemuno.
Kylie achifamba padivi paamai vake, Carol Ann Jones.
Nezve mukoma waKylie Minogue:
Chekupedzisira asi chisiri chidiki chemhuri dzemhuri yaKylie Minogue ndivo vanun'una vake vaviri kureva; Dannii naBrendan Minogue. Munun'una wake, Dannii akazvarwa pazuva re20th raGumiguru 1971 kuMelbourne uye akapinda chikoro chimwe chete saKylie.
Dannii zvakare muimbi weAustralia pamwe neanoteedzera modhi uye akatsigira Kylie mune dzimwe nziyo dzenziyo. Brendan, munin'ina waKylie Minogue inyanzvi nhau yekamera muAustralia.
Hanzvadzi yaKylie, Dannii nemukoma wake, Brenda Minogue
Nezve vazukuru vaKylie Minogue: Kylie Minogue uyo achiri kuzoroora, ndimainini kuvana vevanin'ina vake.
Munun'una wake, Brendan ane vana vana avo ruzivo rwushoma rwunozivikanwa nezvake apo munun'una wake, Dannii ndiye amai vevaviri panguva yekunyora, nemwana wake mudiki achinzi Ethan.
Nezve hama dzaKylie Minogue: Achienderera mberi kumadzitateguru aKylie, ambuya vake amai vaMillicent Riddiford mwanasikana waGeorge Morgan Riddiford naMargaret Megan Hughes apo sekuru vake amai vaDenis Evan Jones mwanakomana waRobert E. Jones naHarriet Parry. Hapana ruzivo rwakawanda rwunozivikanwa pamusoro pasekuru nasekuru vababa vake pamwe nasekuru nasekuru vake.
Kylie Minogue Hupenyu hweMunhu:
Hupenyu hwega hwaMinogue kure nebasa rake rehupenyu hunoita hupenyu hwake kunyanye kunakidza kupfuura iwe zvawaizofungidzira.
Tinokuunzira zvigadzirwa zvehunhu hwake kuti akubatsire iwe kuti uve nemufananidzo uzere wake. Minogue's Persona musanganiswa weGemini Zodiac maitiro.
Zvinofarirwa naKylie Minogue uye zvinovaraidza: Zvichafadza kuziva kuti Kylie Minogue ane zvakawanda zvinofarira uye zvinokuvaraidza.
Iye anonyanya kugona pakutamba chikwambo uye anowanzo kunzi dhimoni rinopwanya mutambi. Shamwari yake Kathy Lette akamboudza Mirror kuti;
“Kazhinji tinowanzoita makwikwi eamarathon eScrabble. Kylie ane mutambo pasi kune hunyanzvi hunyanzvi - iye anoziva nzira yekukora hombe uye haasvibise kutenderera. Anogara achikunda. ”
Kylie Minogue Mararamiro:
Mararamiro emuimbi weAustralia akakodzera mukurumbira wake sezvo achirarama hupenyu hwoumbozha. Kuve ari anotengesa zvakanyanya muAustralia Artist wenguva dzese, Minogue mambure akakosha anofungidzirwa kunge ari mari yekukwira ye $ 90 mamirioni.
Kwakatangira hupfumi hwake kunonyanya kubva kune kwake muimbi anoedza uye endorsement inobata nemhando dzakadai saCasadei, Coty, uye Dolce & Gabbana kutaura mashoma.
Zvinhu zvaKylie Minogue: Muimbi weAustralia akazviwanira marudzi akasiyana epfuma.
Kutanga, iye ane imba yemhando yepamusoro uye yakashongedzwa zvakanaka inosvika madhora zviuru zvina muSouth Kensington, London. Minogue akaonekwa achirovanisa mota yake - Maserati Gran Tourismo - pazviitiko zvakawanda.
Kylie Minogue Chokwadi:
Kuputira yedu Kylie Minogue nyaya yehucheche uye biography, heano zvimwe zvishoma-kuzivikanwa chokwadi pamusoro pake izvo zvichakubatsira iwe kuti unzwisise zvakakwana mufananidzo weBio yake.
Sekureva kwe DailyMail, Vabereki vaKylie Minogue vakamurera mukutenda kwechiKristu uye mumhuri yeRoman Catholic. Nekudaro, mumakore achangopfuura, pakave nekuchinja pane zvaaitenda zvechitendero.
Munguva yehondo yake yekurwisa kenza, Kylie akaonekwa achiisa kabharasi rukoko uye akapindawo misangano yavo. (Kabbalah inzira yeesoteric, kurangwa, uye chikoro chemafungiro mune zvakavanzika zvechiJudha. Zviito zvake zvakasiya vateveri vake vazhinji vaine mibvunzo isina kupindurwa kuti kutenda kwake kuri kupi.
Munyika yevakakurumbira uko tattoo yakakurumbira, Kylie Minogue haafarire kuisa inki chero mhando yetattoo pamuviri wake.
Tichifunga nezvezera rake panguva yekunyora, zvingave zvakanaka kufunga kuti muimbi weAustralia anogona kusanyorera chero tattoo mune ramangwana rinouya.
Kylie Minogue anga achingwarira zvakanyanya mhando yezvinhu zvaanodya kana kunwa. Haaputi fodya sezvo achifunga kuti kuputa hakuna kunaka kune hutano. Uyezve, Kylie haapindiri mukunwa zvakanyanya sezvo iye achiedza kuchengetedza kudya kwakaringana mukudya kwake.
Nhengo dzese dzemhuri yaKylie Minogue dzakasiiwa dzakasuruvara sezvo murombo Kylie akaonekwa aine kenza yemazamu mumwedzi waMay 2005 aine makore makumi matatu nematanhatu.
Akarwa nechirwere kwenguva yakareba uye akazove anokunda mushure mekurapwa kwakawanda.
Minogue akazivisa kumapepanhau mumwedzi waGunyana 2019 kuti kuongororwa kwake uye kurwa nekenza ndicho chete chikonzero nei asina vana.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Kylie Minogue Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!